Amerika Latina: ny mpivaromandeha any anaty bisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2018 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Français, বাংলা, Español, عربي, English
(Marihina fa tamin'ny 23 Jolay 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Hita any amin'ny tanàndehibe rehetra any Amerika Latina ity fisehoan-javatra manaraka ity. Ao an-tanàndehibe, miakatra anaty bisy ny olona iray, na tanora na antitra, na lehilahy na vehivavy, miditra vetivety ao anaty fiara, misaotra ny mpamily namela azy hanao izany ary avy eo mandeha amin'ny lalantsara mba hampiseho ny entany amin'ny mpandeha. Efa tena mahazatra ho an'ny mpivarotra sy ny mpandeha ity toe-javatra ity, hany ka tsy taitra intsony na ny mpandeha na ny mpivarotra. Nanamarika i Andrés Rodríguez ao amin'ny bilaogy Modestamente Humano fa “mampiasa teny mitovy avokoa ny ankamaroan'izy ireo, ary izany no mahatonga ny olona maro toa ahy mahay tsianjery ilay teny izay somary samihafa, kanefa samy manana lantom-peo mitovy avokoa,” izay matetika mitovy feo avokoa.
Sary avy amin'i Esteban Suástegui nampiasana lisansa Creative Commons. http://suastegui.wordpress.com/2008/05/09/vendiendo-en-los-buses/
Rodríguez dia avy any Quito, Ekoadaoro ary nanamarika fa misy mpivaro-mandeha miavaka amin'ny hafa:
Misy ihany anefa ny mpivarotra miavaka amin'izany. Ho tantaraiko anao ny iray na roa tamin'ireo tantara ireo. Nisy mpivarotra vatomamy iray, tsy dia mahafinaritra loatra izy kanefa nahalafo entana 2.50 ka hatramin'ny 3 dolara isaky ny miakatra ao anaty bisy, izany hoe eo ho eo amin'ny olona miisa 10 na 12 eo no mividy ny entany. Mahalafo izy satria misy zavatra hafa ataony. Rehefa miditra ao anaty bisy izy dia misarika ny saina amin'ny resaka politika, ny laharana sy ny antontan'isa ao amin'ny firenena, miresaka momba ny fivavahana izy, ary indraindray aza izy dia mampianatra lesona anay, mikaroka ao anaty aterineto izy mba hiresahany momba ny lohahevitra mahaliana amin'ny mpanjifany. Rehefa vita ny resany, izay lava kokoa noho ny an'ny mpivarotra mahazatra, dia maro amintsika no manana vatomamy 5 ao anaty paosy sy lany 25 santima izay tsy mandrava ny harenan'iza na iza akory,
Ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra, mizara ny zavatra hitany iray hafa momba ny mpivarotra an-dalambe iray i Estertor, izay manao mihoatra noho ny hafa mba hivarotana ny ranon-javatra iray hanadiovana ny kiaka amin'ny DVD. Entiny miaraka aminy ny famakiana DVD enti-tanana iray mba hampisehoana ny fomba hanaovana izany, rehefa avy kikisana amin'ny papier de verre ny DVD, ary avy eo rarahana ilay ranon-javatra mba hampandeha izany indray avy eo.
Na dia manelingelina ny mpandeha marobe aza izany dia mbola manaja ny asa mafy ataon'ireo mpivarotra ireo ihany ​​ny mpandeha sasany . Mety tsy mahazo vola be izy ireo isaky ny mandeha, kanefa miha-mitombo mandritra ny tontolo andro ny varotra ataony. Mankasitraka ny asan'ireo mpivaro-mandeha ireo i Esteban Suástegui, bilaogera avy any Goatemala ao amin'ny bilaogy Pensamientos de un Suástegui.
Na dia eo aza ny fandriky ny varotra rehetra izay ny tafiditra lalina aminy ihany no mahalala izany, ary araka ny hita ny haratsin'ny vokatra sy ny maha-lany daty izany mihoatra ny iray volana, na dia eo aza ny tabataba, ny voka-dratsiny sy ny fahasemporana aterany, dia mahafinaritra ny mahafantatra rehefa manomboka mieritreritra fa, araka ny lazaina hoe: miezaka ny mitady vola izy ireo mba hamelomany ny fianakaviany, fa tsy manao ditra, ka mba hanaovana ny firenena mba ho tsara endrika kokoa.